Nagarik News - व्यङ्ग्य : नाता
बिहीबार ४ मंसिर, २०७१
'उपसभापतिज्यू, बर्बादै भइगो नि? तपार्इंले यो के गरेको?' एउटा कार्यकर्ताले दिक्क मान्दै भन्यो।
'मैले त्यस्तो के गरेँ र?' उपसभापतिज्यूले अलि रिसाएको लवजमा भन्नुभयो, 'प्रजातन्त्रलाई हानि हुने कुनै काम गरेको छैन। समाजवाद र लोकतन्त्रका लागि लडेको लड्यै छु। पार्टीलाई अहित हुने काम आजसम्म गरेजस्तो लाग्दैन। बरु मरिच चाउरिएजसरी अपमान, तिरस्कार र घृणा सहेरै भए पनि यो बुढेसकालमा चारतारे झण्डा बोकेर हिँडेकै छु।'
उपसभापतिको टर्रो जबाफले कार्यकर्ताहरू मुखामुख गर्न थाले। प्रश्न सोध्ने कार्यकर्ता पनि अक्क न बक्क देखियो। कार्यकर्ताहरूले उपसभापतिबाट यस्तो कडा जबाफको अपेक्षा गरेका थिएनन्।
'तपाईंले प्रजातन्त्र र पार्टीको लागि योगदान पुर्याोउनुभएको छैन भनेर हामीले कहाँ भनेका छौँ र?' निकै बेरपछिको असजिलो मौनतालाई चिर्दै अर्को कार्यकर्ता हिम्मत जुटाउँदै बोल्यो, 'तपाईंजस्ता नेताका कारण यो पार्टी जिउँदै छ। तपाईंहरूकै संघर्षका कारण पार्टीले इतिहास रच्न सकेको छ। यसका लागि तपाईंहरूप्रति हामी आमकार्यकर्ता आभारी छौँ। तर, यो पछिल्लो नियुक्तिले मर्नु न बाँच्नु पार्यो'। कहीँ कतै कुरै गर्नु हुँदैन। तेरो उपसभापतिले त नातागोता सबैलाई लाइन मिलायो भनेर खिसी गर्छन्। झन् प्रतिपक्षका नेता–कार्यकर्तासामु त पर्नै हुँदैन। के छ हो नातावादी पार्टीको कार्यकर्ता भन्छन्। साह्रै गाह्रो भयो।' कार्यकर्ताले लगभग भाषण गरेको शैलीमा आफ्नो कुरा सिध्यायो।
उपसभापति केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्को कार्यकर्ता बीचमै बोल्यो, 'हो भन्या। पत्रकारदेखि जनतासम्मले प्रश्न सोधेर हैरान पारिसके। हुँदाहुँदा रासनपसलेसम्मले जिस्क्याउन थालिसक्यो। अस्ति बिहान दूध लिन जाँदा पसलेले 'यो देशमा लोकतन्त्र त तिम्रो उपसभापतिलाई जस्तो कसैलाई आएन है? भनेर मर्नु न बाँच्नु पार्योत। साँच्चै, उपसभापतिज्यू, साह्रै मुश्किल भो। कांग्रेसी कार्यकर्ता हुँ भनेर हिँड्नसमेत गाह्रो हुन थाल्यो।' कार्यकर्ता रुनै आँटेजस्तो देखियो।
'कुरो यसो पो,' उपसभापतिको अनुहार रातो बन्यो। रिसलाई थाम्दै उपसभापतिले भन्नुभयो, 'मैले गर्दा कांग्रेसी हुँ भन्न पनि गाह्रो भयो है तपाईंहरूलाई? ए, उसो भए मैले पार्टीलाई समस्यामा पारेँ। हैन, तपार्इंहरू नेताहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ हँ? मैले विदेशी भइसकेकी छोरीलाई ल्याएर नेता मन्त्री त बनाएको त छैन नि? श्रीमतीलाई सभासद् त बनाएको छैन नि। पढेगुनेको त्यसमा पनि इन्जिनियर भइसकेको योग्य मानिस गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्डको प्रमुख बन्यो भन्दैमा तपार्इंहरूलाई किन यस्तो टाउको दुखेको? योग्य मानिस योग्य ठाउँमा पुग्दा तपाईंहरूले त खुशी मनाउनुपर्ने हो? यो देश योग्यता नभएका मानिसहरूका कारण पछाडि परेको हो। योग्यता भएको मानिसले अवसर पाएन भने यो देश कहिले उँभो लाग्छ? तपार्इंहरू नै भन्नुस् त।' उपसभापतिज्यूले सम्पूर्ण कार्यकर्ताको अनुहारतिर हेर्नुभयो।
कार्यकर्ताहरू सोचमग्न देखिए।
'उपसभापतिज्यू, तपाईंको कुरा मैले मानेँ। तर, यही बेलामा ज्वाइँ र सम्धीलाई पनि किन नियुक्त गर्नुभएको नि?' सानो गाँठीको कार्यकर्ताले पिलन्धरे आवाजमा सोध्यो।
'कुरा स्पष्टै छ नि, ज्वाइँसाप र सम्धीज्यू पनि योग्य हुनुहन्छ। त्यसैले उहाँहरूको पनि योग्यताको कदरस्वरूप नियुक्ति भएको हो। योग्य मानिसले योग्यताअनुसार काम पाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। मेरा सम्धी र ज्वाइँसापले नियुक्ति नपाएको भए पनि अरू कसैको ज्वाइँ र सम्धीले नियुक्ति पाउँथ्यो। आखिर अरू कसैको ज्वाइँ र सम्धी पर्ने ठाउँमा मेरो पर्नुभयो। यति जाबो कुरालाई आकाशै खसेजसरी लिनुभएन नि,' उपसभापतिज्यूले सम्झाउँदै भन्नुभयो।
कार्यकर्ताहरू फेरि बिलखबन्दमा परे। मुखामुख गरे। कसले बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ला भनेर एक–अर्काको अनुहारमा हेर्न थाले।
'पदमा पुगेपछि आफ्नैका लागि मात्र गर्ने हो भने जनताका लागि यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ त भन्न मिलेन नि उपसभापतिज्यू,' एउटा कायकर्ताले जोसिएर भन्यो।
'को पदमा पुग्यो?' उपसभापतिका आँखा रिसले लाल देखिए। निकै उत्तेजित स्वरमा उपसभापतिले भन्नुभयो, 'म अहिले मन्त्री भा'छु? कि संविधानसभाको कुनै समितिमा सभापति छु? म कुन चाहिँ सार्वजनिक पदमा छु। लु तपार्इं नै देखाइदिनुस्? के म अहिलेको प्रधानमन्त्री हो? हुँदै नभएको कुरामा आरोप नलगाउनुस्।'
'पार्टी सत्तामा छ। अनि तपाईं पार्टीको उपसभापति। यो पद नभए के हो त?' कार्यकर्ता अलि जण्डै परेछ। निर्भीक भएर प्रतिवाद ग¥यो।
'ए तपार्इंले यो मेरो सेरेमोनियल उपसभापति पदलाई पनि पद भन्नु भा' है।' उपसभापतिको रिस थोरै पनि घटेको थिएन। टर्रो स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, 'यो उपसभापतिको पद त मेरा लागि नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छाबाउको अनुहारजस्तो भा'छ। न गुट बनाउन सक्या'छु। न प्रधानमन्त्रीका लागि लाइन मिलाउन सक्या'छु। सत्र पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएँ। तैपनि प्रधानमन्त्री हुन सकिनँ। यो उपसभापति पद त मेरा लागि हुनसम्म अफाप भयो। आफ्ना लागि त केही गर्न सकिनँ, सकिनँ। तै, तै आफ्ना नातागोतालाई केही गरौँ भनेर यसो नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाउँदा तपार्इंहरूलाई औडाहा भयो, हैन? मैले प्रजातन्त्रका लागि त्यत्रो जेलनेल भोगेँ। त्यत्रो कष्ट झेलेँ। के मैले यति प्रतिफल पनि नपाउने?' उपसभापतिले गर्जिंदै भन्नुभयो।
कार्यकर्ताहरूको अनुहार नुन खाएको कुखुराको जस्तो भयो। कसैको बक फुटेन।